Hordhaca BYOD ee shabakadaha IT
Internet & Shabakad Fikradaha Muhiimka ah
BYOD (keena qalabkaaga) ayaa soo baxday dhowr sano ka hor sida isbedelka habka ay hay'aduhu u heleen shabakadooda kombiyuutarka. Dhaqan ahaan waaxda farsamada (IT) waaxda ganacsiga ama iskuulku waxay abuuri doonaan shabakado xiran oo keliya oo ah kombuyuutarrada ay leeyihiin ay heli karaan. BYOD wuxuu u ogolaanayaa shaqaalaha iyo ardayda in ay sidoo kale ku biiraan kombiyuutaradooda, casriga iyo kiniinada shabakadaha kale ee furan.
Dhaqdhaqaaqa BYOD wuxuu kiciyay dacaayadaha casriga ah ee kumbuyuutarrada iyo kiniinada iyo kharashyada hoose ee kombiyuutarada laptopka. Inkastoo ay hore ugu tiirsaneyd ururada si ay u siiyaan qalabka shaqada, marar badan shakhsiyaadka hadda waxay leeyihiin qalabyo badan oo awood leh.
BYOD wuxuu ardayda iyo shaqaaluhu ka dhigi karaa mid waxtar leh iyaga oo awood u siin kara inay isticmaalaan qalabka ay jecel yihiin shaqada. Shaqaalaha horey u baahnaa in ay qaataan taleefanka gacanta ee shirkadda bixiya iyo taleefankooda gaarka ah, waxay awoodi karaan inay bilaabaan hal qalab oo keliya. BYOD sidoo kale waxay hoos u dhigi kartaa kharashyada taageerada ee waaxda IT by yaraynta baahida loo qabo in la soo iibsado iyo qiimo qalab hardware. Dabcan, ururadu waxay sidoo kale raadinayaan inay ilaaliyaan ammaanka ku filan shabakadahooda, halka shakhsiyaadka ay doonayaan in ay shakhsiyadooda shakhsi ahaanba xaqiijiyaan.
Caqabadaha Farsamo ee BYOD
Nabadgelyada Nabadgelyada ee shabakadaha IT waa inay awood u lahaadaan helitaanka qalabyada BYOD ee aan ansaxin iyadoon loo oggoleyn in qalabka aan loo oggolaan inay isku xirmaan Marka qofku ka tago urur, helitaanka shabakada ee ay BYODs waa in si degdeg ah loo buriyo. Isticmaalayaasha waxay u baahan karaan inay diiwaangeliyaan qalabkooda IT-ga waxayna leeyihiin barnaamij gaar ah oo lagu rakibo.
Taxaddarrada amniga ee qalabyada BYOD sida sirta kaydinta waa in sidoo kale loo qaadaa si loo ilaaliyo xogta ganacsiga xasaasiga ah ee lagu keydiyo BYOD hardware haddii dhacdada xatooyo.
Dadaal dheeraad ah oo lagu hirgelinayo qalabka loo adeegsado codsiyada shabakada ayaa sidoo kale laga filayaa BYOD. Qalabka kala duwan ee qalabyada ku shaqeeya nidaamyada kala duwan ee hawlgalka iyo xirmooyinka software waxay u muuqdaan inay soo bandhigaan arimo farsamo oo badan oo leh codsiyada ganacsiga. Arimahaan waxaa loo baahan yahay in la xalliyo, ama haddii kale xuduudaha lagu dhejiyo nooca qalabka ee u qalmi kara BYOD, si looga fogaado wax soo saar la'aanta ururka.
Caqabadaha aan farsamada ahayn ee BYOD
BYOD wuxuu xoojin karaa isdhexgalka online-ka ee u dhexeeya dadka. Iyadoo la samaynayo shabakadda ururka oo si sahlan loo heli karo guriga iyo safarka, dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay saxeexaan oo ay gaaraan dadka kale saacadaha aan caadiga ahayn. Noocyada internetka ee kala duwan ee shakhsiyaadka waxay ku adkeynayaan inay saadaaliyaan in qofku raadin doono jawaabta emailkiisa Sabtida Sabtida, tusaale ahaan. Maareeyayaasha waxaa laga yaabaa inay jiidaan inay wacaan shaqaale joogta dhakhtarka ama fasax. Guud ahaan, haysashada kartida dadka kale mar walba waxay noqon kartaa wax aad u wanaagsan, oo ku dhiirigeliya dadka inay noqdaan kuwo aan ku-tiirsaneyn in ay ku xirnaadaan halkii ay ku xalin lahaayeen dhibaatooyinkooda.
Xuquuqda sharciyadeed ee shakhsiyaadka iyo ururadu waxay la mid yihiin BYOD. Tusaale ahaan, ururadu waxay awood u leeyihiin in ay la wareegaan aaladaha shakhsiyeed ee ku xiran shabakaddooda haddii kuwa lagu eedeeyo inay ku jiraan caddayn ficil sharci ah. Xal ahaan, qaar ayaa soo jeediyay in macluumaadka shakhsiyeed ee ka mid ah qalabka loo adeegsado BYOD, inkasta oo taasi tirtiraysa faa'iidooyinka awood u lahaanshaha isticmaalka hal qalab labadaba shaqada iyo shaqsiyaadka shaqsiga.
Kaydinta kharashka dhabta ah ee BYOD ayaa laga doodi karaa. Dukaamada IT-ga ayaa yarayn doona qalabka, laakiin ururadu waxay u badan tahay inay wax badan ku qaataan waxyaabaha sida
kor u qaadidda kaabayaasha tusaale ahaan, aqoonsiga, cod-bixinta iyo adeegga kaydka shabakada ee qalabyada BYOD
biilasha taleefanka - lacag celinta shaqaalaha ee khidmadaha shakhsi ahaaneed (qorshooyinka aan lahayn qiimo dhimis shirkad)
tababarka iyo taageerada - gaar ahaan, wicitaanada taageerada la xiriirta iyo dhibaatooyinka xalinta dhibaatooyinka u dhaxeeya qalabka BYOD iyo nidaamyada shabakadaha iyo nidaamka software
Sidee Kormeerka Kumbuyuutarka ee Ugu Fiican Adiga Looga Helo?
Dhibaatooyinka Shabakada Kombuyuutarada ee Caan ka ah internetka
H.323 Nidaamka Isku-xirka Wireless
Muuqaal Muuqaal Mawduucyada Shabakadda Kombuyuutarada
Soonaha Deegaanka ee Shabakadda Computer-ka
Nidaamka Hawlaha iyo Shabakadaha Kumbiyuutarka
VoIP - Codka ka baxsan Protocol-ka Internetka
Horudhac Nabadgelyada Nabadgalyada Computerka
Waa maxay RAID?
Dalladaha Diiwaanka Diiwaanka Dijital ah ee ugu Dheer
Sida loo xaddido Safarada safari si ay u si toos ah u cusbooneysiiso
Go'aanso Your DirectX Version iyo Shader Model
Sida Loogu Heli Karo ama Afduubaha Hadal Ku Jira Guriga iyo Guriga
Baro Command Linux - getfacl
Raadi farriimo ku soo kordha Apple Mail leh sanduuqa casriga ah
Fahmidda dhibcooyinka Autofocus
Sidee loo Isticmaalaa Keydka Keydka Keydka iyo PIN
11 Maareeyayaasha Macaamiisha Bilaash ah
10 Aboodhadhka Adiga Ma Ogtahay Inay Cunto Iibisay
Waa Maxay Furaha Diiwaangelinta?
Sida loo xaliyo Xadidaad ama Xiritaanka Isku xirnaanta ee Windows
11 Waqtiga Kaydka Waqtiga Kaydka Barnaamijka ee iPhone
Isticmaalka saxda ah ee HTML-P iyo BR Elements
Miyuu Barnaamijka Dib-u-soo-celinta Diiwaan-galin Miyuu Dhamaystaa Wax kastoo Loo Delay
Baro Command Linux - rmmod
Maxay 'MT' ka dhigtaa Twitter?
Sida loo Xaqiijiyo Dhibcaha iPad-ga
Best DSLR iyo Sawirada Mirrorless Under $ Miisaaniyadda $ 1,000
Samee Barta Rasmiga ah ee Fariin Cusub ee Loo Yaqaano